UNamelis Rudnios kaime “Nykštukas”
Relax nosapho lonke okanye uchithe impelaveki yothando nomntu omthandayo kule ndawo yoxolo yokuhlala. Thatha i-sauna, bhukisha umqeqeshi womsitho wekoko okanye ukuphefumla nzulu-iseshoni yokuphinda uye ngqo ekhaya, chola amakhowa okanye uzame ukukhwela iphenyane, yonwabele ilali entle kunye nendalo.
Usapho okanye isibini sasekhaya kwindawo entle, kwisithili saseVarėna, kwilali yaseRudnia, iikhilomitha ezili-100 ukusuka eVilnius, iikhilomitha ezingama-50 ukusuka eDruskininkai, iikhilomitha ezingama-20 ukusuka eVarėna.
I-Cottage yabantu aba-2 okanye intsapho enabantwana kwiholide ezolileyo.
Lomzi unezindlu eziy2 thina nabafana abancinci ababini sihlala kwi main house ngoko ke iintsapho ezinabantwana zamkelekile.
Izindlu zisondelelene enye kwenye, ngoko siya kukwazi ukukubonelela ngokukhululeka ngayo yonke into oyifunayo. Indawo ibiyelwe, kukho ujingi, izinto zokudlala ezininzi, ibhafu, ikomityi yabantwana, i-hammock, ibhegi, iibhedi zelanga, ithala leencwadi elincinci, iWiFi.
I-Cottage 50 sq.m. ecaleni kwehlathi lepine, amakhowa amaninzi kunye namaqunube, umgama oziikhilomitha ezi-2 kukho isibini samachibi alungele ukuqubha abantwana, iikayak eziqeshiswayo emaphandleni, iindawo ezintle zokukhwela ibhayisekile okanye ukukhwela intaba.
Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga !!!
Ibhafu eshushu ngempelaveki ixabisa i-110 € eyongezelelweyo
Isauna ibandakanyiwe kwixabiso
Ndihlala ndonwabile ukudibana nabantu abatsha kwaye ndive amabali amatsha. Nceda ukhululeke ukubuza imibuzo.